Posted by: radio himilo June 17, 2017
Muqdisho – Sila Sutharat, oo ah digaag-dube ku nool Phetchaburi, Thailand ayaa la yimid hal-fikir lala dhacay kaas oo uu ku dubo digaaga. Halkii uu ka isticmaali lahaa dhuxul iyo danab, wuxuu adeegsadaa 1,000 dhalooyin moobil ah kuwaas oo sare u qaada heerkulka kuleelka cadceedda kusoo dhacda. Wuxuu asal ahaan ku kariyaa hilibka hal digree ka badan 300 centigrade oo kuleelka qorraxda ah.
Previous: Shirkad shaqaaleysiinaysa da’da ka weyn 55 jir!
Next: Baaqa Naafada Qaranka – Halgamayaal Gargaar u baahan!